Mozika milanto :: Hampihetsi-po ny Malagasy mpitia kalo klasika ny « Hiakan’ny Parisy » • AoRaha
Mozika milanto Hampihetsi-po ny Malagasy mpitia kalo klasika ny « Hiakan’ny Parisy »
Manatontosa atrikasa manodidina ny mozika eto amintsika ny “Hiakan’ny Parisy” (Cris de Paris) avy any Frantsa amin’izao fotoana izao. Ny foibe Institut français de Madagascar (IFM) Analakely no mampiantrano azy ireo mandritra ny fitsidihan’izy ireo aty. Efa nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo ny fampiofanana ka mpihira malagasy fito ambin’ny folo mianadahy no nianatra ny fikirakirana ny feo niaraka tamin’i Geoffroy Jourdain mpitarika ny Hiakan’ny Parisy. Marihina fa vondrona natao handalina ny lafiny feo ahitana mpihira sy mpitendry zavamaneno miompana amin’ny mozika klasika ny Hiakan’ ny Parisy.
Maromaro ny fisehoana an-tsehatra hataon-dry zareo ao amin’ny lampihazon’ny IFM Analakely amin’ ity herinandro ity. Ho an’ny anio, izy ireo no hiantsa ao anatin’ny “Kaonseritra klasika amin’ny mitatao vovonana” karakarain’ny Madagascar Mozarteum. Hanatontosa fampisehoana mampihetsi-po indray ry zareo amin’ny takarivan’ny zoma ho avy izao. Fotoana hiavaka ihany koa ny lanonana mitondra ny loha­teny hoe “Hiakan’ny Iarivo” hotanterahina amin’ny alahady 13 oktobra 2019. Hampiaraka talenta ao ny Hiakan’ny Parisy sy ireo mpihira malagasy fito ambin’ny folo mianadahy nanaraka ny atrikasa.
Ankoatra izay, hisy fikarohana arahina famoronana ara-javakanto ifarimbonan’ireo mpikambana ao amin’ny Hiakan’ny Parisy sy mpanakanto malagasy maromaro (mpikalo beko, mpitendry valiha). Hoentina haseho amina hetsika lehibe any Frantsa amin’ny taona 2020 izay mozika voavolavola eo, raha ny fantatra.